Egypt - sombuso impucuko yethu, izwe izinkulungwane zezindaba, kanye kahle walondoloza esikhumbuzo yezakhiwo, okuyinto ningofakazi buthule emlandweni wesintu. Njalo ngonyaka izigidi zabantu ezivela emhlabeni wonke ziza lapha uthinte izwe endala, kanye uphumule ogwini langa laseGibhithe, ehlezi kwelinye lamahhotela ngokunethezeka esikhathini coast, isibonelo, i-brand ihhotela elisha Jasmine Palace Hurghada 5 *.
Ngokusho ukuthandwa kwakhe phakathi baseRussia zokungcebeleka waseGibhithe ingafanisa ngaphandle Turkish noma yaseKhupro. Isenzakalo esidume kunazo zonke kulo bayizinkulungwane Sharm el-Sheikh, Hurghada, Marsa Alam, Zaafarana, Alexandria, El Gouna nabanye. Iningi lazo bahlanza ngasemanzini yasoLwandle Olubomvu, futhi lapha isizini ukugeza ihlala unyaka wonke, kodwa zokungcebeleka iMedithera ofanele kuze kube iholidi ngaphambi ebhishi April kuya ku-October. ULwandle Olubomvu idume coral zayo zamakhorali, ngakho-ke zithandwa kakhulu-scuba diving, futhi kukhona izikhungo eziningi diving. Jasmine Palace Hurghada 5 * Ihhotela, esizokhuluma ukumboza kulesi sihloko, itholakala ogwini Hoegaarden. Kodwa ngaphambi kokuqhubeka incazelo ingqalasizinda yayo futhi idivayisi yangaphakathi, ake ufunde kabanzi mayelana yokungcebeleka uqobo.
Hurghada - iyipharadesi kubathandi ebhishi
The yokungcebeleka ingamakhilomitha angu-500 ukusuka dolobha yaseGibhithe - Cairo. He is resort wokuqala kuleli zwe, yona eyaqala ukwenza i ukuthatha namaqembu amakhulu izivakashi zakwamanye amazwe. Lapha ngaphambili kuka kwezinye izingxenye Egypt, ke waqala ukuthuthukisa ibhizinisi izivakashi - ezakhiwa eziningi amahhotela, zokudla nezindawo zokudla. Ngokwemvelo, ezifana yizivakashi imibukiso kakhulu izimo iholidi, kodwa ngakolunye uhlangothi, futhi ngezindlela abaningi amahhotela resort of uyisidala futhi hhayi kakhulu eyinkimbinkimbi. Nokho, lokhu akusebenzi ehhotela Palace Jasmine Hurghada Wena (Hurghada), ngoba ingenye lomncane kanye abahlonishwa kakhulu ehhotela izakhiwo hhayi kuphela e Hurghada, kodwa kulo lonke elaseGibhithe.
Amahhotela e Hurghada
Njalo ngonyaka ngalolu coast ukuvula amahhotela amasha namadala kuthiwa kabusha. Ngokwezibalo, umuzi isibalo amahhotela capita sabantu ngayinye ingenye yezindawo ehola emhlabeni. Phakathi izindawo ehhotela Deluxe wazibona izimpawu ezinjalo enkulu efana "Hilton", "San Rayz", "Marriott", "Intercontinental", "Sheraton" kanye nabanye abaningi.
Uma ufuna i iholide upscale - Hamba eGibhithe! Amahhotela Jasmine Palace kuyona 5 * futhi Makadi Garden Azuri 4 * kukhona amasha izakhiwo ehhotela kulo lonke ugu waseGibhithe. Bona ezakho yimiphi imikhiqizo ehhotela, kodwa neze kunabayeni omakhelwane bazo abadumile. Inzuzo enkulu Hurghada amahhotela wukuthi basuke kahle aguqulelwe lonke wonke amalungu omkhaya, kokubili abadala kanye nezingane. Ngaphezu kwalokho, yokungcebeleka iseduze Luxor - isikhungo indawo iholide, futhi elula ukuya ezikhangayo yingakho okuningi. Kwenqwaba zezivakashi emahhotela Hurghada - imibhangqwana nezingane kodwa umhlalaphansi. Youth uzobe boring lapha, kodwa uma ufuna njalo ungathola ukuzijabulisa umphefumulo.
Kanjani ukuze uthole Hurghada?
Ngakho, usuthathe isinqumo ukuya eholidini eGibhithe wathengwa nxazonke lapho yokuhlala Jasmine Palace Resort Ihhotela. Hurghada has sezindiza ayo, ngakho-ke asikho isidingo sokuthi lokuqala ndizela Cairo noma imuphi omunye umuzi kuleli zwe, bese ukuwela resort. Ukuze fly kusukela eMoscow kuze kube Hoegaarden amahora amane nesigamu. Kusuka lapha endaweni yokungcebeleka kuyinto km 5-7 kuphela. Labo yizivakashi ezibuka amazwe, bafika eGibhithe ngaphandle kwaloba travel ejensi, noma enqaba ukudluliswa, ungaya ehhotela yakho noma thatha itekisi noma ezimotweni Shuttle. Nokho, izisebenzi zakulesi Jasmine Palace Hurghada 5 * ukuhlangabezana nezivakashi zabo esizayo cishe ngesikhathi kummango futhi kahle aziyise endaweni eyinkimbinkimbi ehhotela. Njengoba itholakala km 18 kusuka esikhumulweni sezindiza, bese endleleni ke wachitha cishe isigamu sehora, ukuthi impela kancane.
incazelo Ihhotela Jasmine Palace (Hurghada) 5 *
Lokhu zikanokusho ehhotela eziyinkimbinkimbi Deluxe kuyinto 22 km kusuka Hurgardy, ogwini loLwandle Olubomvu. Njengamanje omncane amahhotela e-Egypt, njengoba kwatholakala entwasahlobo ka 2014. Yiqiniso, konke lapha ahlelwe ngokuhambisana namazinga yesimanje, kodwa izidingo okuningi ukulungiswa kanye ukulinda isikhathi eside.
Isakhiwo ine konke okudingayo ukuze ube abahambi izinga ezokungcebeleka babo bonke ubudala izigaba. Ngelilodwa nje, lapha ungabona ingqalasizinda evuthiwe futhi okusezingeni eliphezulu service quality. Ihhotela oluthatha indawo sq ayizinkulungwane 100. Amamitha. Siqukethe 6 izakhiwo: a ezintathu storey isakhiwo main, ezine esinezitezi ezintathu izakhiwo (Isijobelelo izakhiwo) kanye SPA-umzimba.
Zonke izakhiwo Jasmine Palace 5 * ezungezwe zasemazweni engadini ezishisayo. Phambi kwesakhiwo main kukhona kubangela amachibi, onikeza endaweni ikhubalo ekhethekile.
Leli hhotela has 690 amakamelo ukhululekile lwezigaba eziningana, okuyilezi:
amakamelo ejwayelekile nge engadini nendawo ethize 37 sq. m, zingabantu isakhiwo esenezelwe;
igumbi usayizi esezingeni 37 sq. m enombono kwechibi, nazo etholakala esakhiweni esenezelwe;
ngcono amakamelo ejwayelekile nge kolwandle (endaweni - 33 sq.) e isakhiwo esenezelwe;
amakamelo umndeni ekwakheni esenezelwe, ehlanganisa amakamelo amabili okulala nge yiminyango, nomunye yokugezela; endaweni yabo Imininingwane - 42 sq. m, ukuyibona uqhamuka iwindi noma echibini, noma insimu;
lohlanganisiwe inani eliphelele sq 70. m, nge 2 zangasese e isakhiwo esenezelwe ne ukubukwa yensimu;
Igumbi Deluxe nendawo ethize 42 sq. m nge engadini esakhiweni esenezelwe.
Ihhotela inikeza 2 amakamelo ejwayelekile abakhubazekile kanye 54 amakamelo indinganiso non-ababhemayo.
Amagumbi ehhotela bahlanza nsuku zonke, ushintsho nelineni izikhathi 3 ngesonto. Zonke amakamelo abe kuvulandi noma ithala, lokugezela elineshawa, zokugeza kanye hairdryer, LCD TV kanye cable TV, air conditioning, ngocingo, ephephile futhi mini-bar iziphuzo kanye nabanye.
Njengoba zonke aphambili amahhotela eGibhithe, Ihhotela Jasmine Palace kuyona 5 * enza uhlelo "zonke okufakayo" (Wonke womanyano). On insimu yalo zikhona amaningi njengoba 5 zokudlela ngokukhonza ukudla okuhlukahlukene ukulandelana kwamakhosi ezizwe ezihlukahlukene. Yokudlela main ihlanganisa "lezitsha" kanye nabo bonke abanye - a thematic noma "a la Carte". Njengoba zokuphasa imishayo, zingabantu amaningi njengoba 6. Bona zitholakala echibini, ogwini, kanye chithi saka engadini. Lapha, izivakashi ungakwazi ukujabulela ezihlukahlukene cocktail nowasekhaya, iziphuzo kanye bukhoma ukuzijabulisa imibukiso.
"Jasmine Palace kuyona 5 *" kuyinto indawo esihle kakhulu izingqungquthela kanye nezingxoxo. isakhiwo main Ihhotela sika has a kahle ikamelo lengqungquthela. It unikeza kubahlanganyeli ngalezi zenzakalo, futhi wonke umuntu - isikhungo ibhizinisi, esesikhundleni imishini etimviwabukelwa (Imali), khulula inthanethi wireless, iphrinta, isithwebuli, imishini yokukopisha, ifeksi, eqondile Ukudayela yocingo kanye e-mail (zonke kwendibilishi).
Jasmine Palace Hurghada 5 * inikeza eliphezulu ubuhle kanye zokwelapha kahle ku-isikhungo SPA wezinga eliphakeme kakhulu. Nokho, ngokungafani nezinye amahhotela eziningi aphambili, lapho amasevisi spa afakiwe Kubiza nokubuka le ndawo, izivakashi zingathola ukuzisebenzisa kuphela imali. I eziyinkimbinkimbi, njengoba kushiwo ngenhla, zikhona amachibi ukubhukuda eziningana (kokubili ngabantwana nangabantu abadala), eduze okuyinto chithi ilanga loungers nezambulela. By the way, phakathi kwabo kukhona evuthayo yokubhukuda. amasevisi Ihhotela futhi izindawo njengoba ihhovisi wezokwelapha (Imali), ilondolo futhi omile yokuhlanza zesevisi, isevisi concierge, wokubawa abantu bayisekele futhi umthamo bar ehhovisi exchange, sesevisi izenzakalo (amadili, imishado, izingqungquthela, njalo njalo. D.), yokupaka nokunye. Njll .
Naphezu kweqiniso lokuthi ihhotela olufanele esengeziwe ukuphumula ethule ehloniphekayo, kukhona eziningi zokuzijabulisa, kuhlanganise nemidlalo. Izingelosi zihlelwe ngendlela ngenhloso ehlukahlukene izivakashi ngokuhlala eziyinkimbinkimbi ehhotela. "Jasmine Palace Indzawo yekungcebeleka" linikeza amafomu alandelayo lokuzijabulisa:
animation kanye umculo bukhoma kusihlwa;
disco futhi t. d.
Ezinganeni kukhona mini-club, a inkundla yokudlala nge-slide kanye senhliziyo, igumbi lezingane, ichibi splash, nokugada abantwana (ngenkokhelo), ukuzijabulisa zezingane, nokunye. D.
Ihhotela "Jasmine Palace" has lolwandle lalo. Njengezinye emabhishi Red Sea, kuba anesihlabathi. Yonke yokusungula - izambulela, emphemeni izihlalo kanye omatilasi - inikeza amaholide khulula. Ngesikhathi sebehlezi ogwini kukhona bar, lapho ungakwazi ukujabulela iziphuzo kuyaqabula futhi cocktail, futhi kukhona uhla olukhulu lwamanzi ezemidlalo. Njengoba kuphawulwe ngenhla, oLwandle Olubomvu iyindawo ephelele diving. Bonke abafisa afundise futhi ukuqhuba ngowokuqala emphilweni ukuhamba kwamanzi. Kukhona futhi vindserving ethandwa futhi Ukushushuluza amanzi.
Jasmine Palace Hurghada: ukubuyekezwa kanye kwamahhotela izivakashi
Njengoba leli hhotela namanje kakhulu "abasha", amazwana ngakho impela kancane. Phakathi kwabo kukhona okuhle nokubi. Izivakashi ezivela eRussia, ikakhulu ekhononda isevisi, nalwazi kanye nokuntuleka nobuchwepheshe bale abasebenzi, ngaphandle labapheki omsebenzi wakhe cishe yonke ezilinganiselwa 5 amabhola. Nokho, lezi zinkinga ngempela ixazululwe, ngoba isipiliyoni iza isikhathi. okubuyayo ikhathazekile, "izilokotho ehhotela," ongahlangani ehhotela ngalinye. Ngokwesibonelo, zonke izipho lokuzalwa banikwa kude, lo mbhangqwana ngosuku lokuqala sokuhlala egumbini kukhona ubhasikidi wezithelo kanye amaswidi, kanye dinner e yokudlela ngesitayela empumalanga. Nokho, iqiniso lokuthi umshado kufanele ibike uma ukubhuka uhambo futhi alethe isitifiketi somshado. Obhasikidi ngoswidi iyatholakala kumakhasimende avamile. Izinto ezincane, kodwa kuyajabulisa, akunjalo?
Njengoba ubona, ehhotela "Jasmine Palace" has konke ukwenza ukuhlala kwakho eGibhithe kwaba yesiteleka esimnandi. Futhi thina ukhohlwe ukukutshela ukuthi ihhotela ungakwazi ukubhuka uhambo bese uya ezikhumbuzo abadumile bokwakha, okuyinto izinkulungwane zeminyaka. Kulapho iholide lakho iyogcwala ngempela, ngakho - yimpumelelo ngenxa yenkazimulo.
Hotel Royal Mirage Beach Resort Indawo abantu: izithombe, incazelo kanye nokubuyekeza
Antalya Adonis Ihhotela - iholide emnandi uLwandle iMedithera
Izitebhisi ezingaphephile (H1, H2, H3) kanye namanqanaba okuphepha emlilweni
Izidlo ezinomsoco - i-pie ene-blueberries ne-cottage shizi
Job Description 1 Izinsiza kusebenza isigaba. Yiziphi imisebenzi inqubo?